Maxay yihiin qalabka iibka ugu wanaagsan Amazon ee faa'iido isticmaalaya?
Dhammaan suuqyada badeecadda ee Amazon waxay isticmaalaan noocyada cilmi baarista iyo farsamooyinka daroogada ah si ay u horumariyaan ololahooda soo-jiidashada waxayna iibiyaan iibsashada liiska alaabada. Amazon waxay daneeysaa faa'iidadaada waxayna ku siisaa qalab aasaasi ah oo lagu maamulayo alaabadaada iyo kala dambeyntaada. Si kastaba ha ahaatee, barnaamijyadan Amazon ma caawin karaan kiisaska intooda badan. Taasi waa sababta ay macquul tahay in loo isticmaalo qalab iibiyaha Amazon ee seddexaad si uu u soo jiido macaamiishooyin badan oo suurtagal ah oo kor u qaada dakhliga.
Qalabka iibiyaha Amazon wuxuu ku qancin karaa dhammaan baahidaada ganacsigaaga, laga bilaabo baaritaanka shuruudaha baaritaanka taraafikada iyo dhameynta dabagalka Sicir iibsiga Box. Marka, wax kasta oo aad u baahan tahay waa inaad fahamto dhamaan xulashooyinkaaga iyo helitaanka qalabka saxda ah ee qalabka si aad u maamusho hawlaha Amazon e-commerce.
In this article, waxaan ka wada hadli doonaa qaar ka mid ah qalabka iibka Amazon kuwaas oo loogu talagalay soo jiidato gaadiidka badan oo loo badhaxay liiska aad Amazon iyo sare u qaadashada sare Amazon.
qalabka Amazon ee iibka
Qalabka loogu talagalay kuwa doonaya inay lacag u helaan Amazon
Sida laga soo xigtay Amazon Vendor Bartamaha iyo Sales Central, ganacsatada waxay heli karaan lacagahoodii badanaaba laba jeer bishii. Haddii aad rabto inaad dardar geliso nidaamkan (adigoon shaki ku jirin waxaad dooneysaa), waxaad u baahan tahay inaad fuliso mid ka mid ah qalabka bixinta. Waxay u adeegaan inay ku caawiyaan iibiyeyaasha Amazon inay bixiyaan lacag ka badan laba jeer bishii. Isticmaalka qalabkan, waxaad ku heli kartaa lacagtaada maalin kasta. Adeeggan noocan ah waxaa caadi ahaan loo yaqaanaa factoring. Qalabka lacag bixinta degdega ah ayaa bixiya Amazon iibiyaha maalin walba oo ku saleysan xajmigooda iibka. Qalabkani wuxuu si toos ah uga soo qaataa Amazon muddada jadwalka caadiga ah.
Hirgelinta qalabyadaas, waxaad awoodi doontaa inaad si dhaqsi ah ugu kobciso ganacsigaaga sababtoo ah helitaanka degdegga ah ee lacagtaada oo aad mar walba u baahan tahay. Waxay ku siin doontaa fursad aad ku dareento madax bannaan Amazon oo aad maalgelin ku samayso horumarinta ganacsigaaga. Intaa waxaa dheer, waxaad awoodi doontaa inaad xakameyso socodka lacagtaada si aad u bixiso biilasha jadwalkaaga, ma aha Amazon.
Qalab tayo leh oo tayo leh oo ku haboon baahidaada ganacsiga Amazon waa lacag bixin. Qalabkani wuxu bixiyaa lacag-bixinno maalinle ah oo loogu talagalay iibiyeyaasha oo dhan. Qiimaha bilawga ee bishiiba waa 2% iibka Amazon.
Qalabka loo baahan yahay in lagu sameeyo falanqaha calaamadaha iyo wax soo saarka
Haddii aad raadinayso fursadaha wax soo saarka Amazon, qalabka ayaa kuu adeegi doona ugu fiican. Isticmaalidda qalabkaas oo kale, waxaad awoodi doontaa inaad u furtid xogta raadinta ee Amazon si loo go'aamiyo shuruudaha raadinta ee dukaamada isticmaala si aad u hesho waxyaabahaaga. Waxaad awoodi doontaa inaad eegto mugga raadinta luuqad kasta oo la doortay ama erayga muhiimka ah. Waxa kale oo aad isticmaali kartaa xisaabiyeyaasha xisaabinta si loo go'aamiyo kharashyada guud iyo faa'iidada faa'idada ee erey kasta oo raadin ah oo ku saabsan Amazon.
Si aad u hesho shuruudaha raadinta habboon iyo badeecooyin kuu keeni doona dakhliga weyn ee Amazon, waxaad u baahan tahay inaad sameyso olole cilmi-baaris oo aad u ballaaran ee ugu hooseeya ee tabinta ugu wanaagsan ee Amazon. Shuruudaha raadinta sarraysa ee sare waxay kaa caawin doonaan inaad abuurto iibinta iibka-baabuurta Amazon SEO SEO iyo ku guuleysto iibka badan on Amazon. Nidaamka cilmi-baarista ugu muhiimsan ee xirfad-yaqaanada ayaa ku siin kara xogta falanqaynta tartan ee tartanka, oo siinaya aqoon kororsi ah qiimeynta iyo faa'iidada.
Waxaa jira tiro badan oo ah ereyga muhiimka ah ee Amazon iyo qalabka cilmi baarista ee shabakadda. Waxaad u baahan tahay inaad hubiso sida ugu fiican iyaga oo aad u hesho ugu habboon ganacsigaaga. Baaxadda waa qalab cilmi-baaris ah oo Amazon ah oo u adeega si loo ogaado shuruudaha raadinta amazon iyo wax soo saarka Amazon. Waxay ka caawisaa in la ogaado shuruudaha raadinta iibinta baabuur-wadista iyo alaabta qiimaha leh ee kordhinta Google Chrome. Baaxadda waxay muujineysaa shuruudaha raadinta ee ugu sarreeya ee sheyga si ay kaaga caawiso inaad ka soo baxdo raadinta Amazon. Mid ka mid ah faa'iido dheeraad ah waa inaad ka arki karto waxa ku xiga iibsadahaada tartanka.
Isticmaalida agab cilmi-baaris xeeldheer, waxaad awoodi doontaa inaad fahamto faa'idooyinkaaga faa'idada ee alaabta aad u tafaariiqda tafaariiqda. Waxaad heli kartaa qiimaha, khidmadda, iyo qiyaasaha iibka wixii alaab ah oo ku yaal Amazon. Dhammaan macluumaadkaan oo ay bixiso Baahi ayaa kaa caawin doonta inaad yareyso raadintaada. Waxaad ku takhasusi kartaa dhammaan natiijooyinkaaga feylka CSV si loo falanqeeyo dheeraad ah.
Qiimaha bilowga ee bishiiba waa $ 32. 50. Sonar waa qalab cilmi-baaris ah oo loo yaqaan 'Amazon keyword' kaas oo ku salaysan dhammaan cilmi-baarayaasha dhabta ah ee xogta dhabta ah ee ka yimaada raadinta macaamiisha dhabta ah. Sonar wuxuu adeegsadaa algorithm adag si loo ogaado waxa aad macaamiishaada u raadineyso Amazon oo ururiya xogtaas oo dhan xogtooda. Marka la barbardhigo qalabka kale ee muhiimka ah, Sonar wuxuu siiyaa ganacsatada leh fursado badan sida ASIN raadinta daahfurnaanta, raadinta fidinta si loo helo shuruudaha raadinta isbarbardhigga, mugga raadinta Amazon ee mid kasta oo muhiim ah, iyo shaqooyin badan oo qiimo leh.
Waa muhiim in la sheego in Sonar ay ku jiraan keliya shuruudaha raadinta ee ASIN ay ku jirto liiska bogga ugu horreeya ee natiijooyinka raadinta.
Waa barnaamijka Chrome browser oo bilaash ah.
Qalabka loogu talagalay dadka u baahan adeegyada maareynta maareynta
Waxaa jira qalab iibiya Amazon oo u oggolaanaya ganacsatada in ay maareynayaan liiska alaabta Amazon iyo agabyada ka baxsan iibiyaha Dashboard Central. Qalabka iibiyayaashu waxay ku xiraan xogta alaabta Amazon ee macluumaadka dibadda. Hirgelinta qalabkan ganacsiyada ee internetka ah ayaa ku dari kara oo beddeli kara badeecadaha, hagaajinta liiska, liis garaynta, qiimeeynta qiimaha, iyo xitaa isticmaalaan hawlo badan. Qaar ka mid ah Amazon waxay liis gareyn kartaa qalabyada macluumaadkaaga ku kaydsan ee ku yaala kanaalada iibka kale. Waxay ku siinaysaa fursad aad ku iibiso dhammaan waxyaabaha aad ka iibsaneysid suuqyada kala duwan. Intaa waxaa dheer, waxaad maamuli kartaa amarrada iyo maraakiibta si aad u hesho dhamaan qaybaha iibka.
Qaar ka mid ah agabyada maareynta maareynta maareynta waxay bixiyaan siyasad suuq ah oo la heli karo. Sidaa darteed waxay ku taageeri karaan macaamiisha baahida badan ee iibinta.
Qalabkan iibka ah waxaa ka mid ah SalesEngine Plus ($ 49. 95) - waxay bixiyaan agabyo maarayn ah oo buuxa, JoeLister ($ 29) - waxay u adeegaan labada iibiyeyaasha Amazon iyo eBay labadaba; Vendio ($ 99) - si wacan u adeega iibiyeyaasha Amazon iyo goobaha kale ee ganacsiga; SellBrite ($ 183) - ku habboon iibiyeyaasha iyo tafaariiqda sare ee dukaamada Amazon iyo goobaha kale ee caanka ah Source .